Port of Los Angeles Pier 400 Horumarineed Mashruuca - Ellicott Dredges Blog
Mashruuca Dekedda Los Angeles 'Pier 400 Mashruuc Oo U Sii Gudbaya Marxaladda Labaad;
Harooyinka waawayn ee loo yaqaan 'Great Lakes Dredge & Dock' waxay isticmaalaan Ellicott® Brand dredge "Florida" si ay u soo saaraan 50 milyan oo yaroo mitir yad
Source: Qodista Macdanta & Dhismaha & Dib u eegista Qodista Caalamiga ah
Bishii Ogast 18, 1997, Dekedda Los Angeles iyo Ciidanka Injineerada ee Mareykanka waxay u dabaaldegeen Mashruuca Pier 400, oo ah mashruucii ugu weynaa ee qodista iyo qashin-qubka ee USA, oo abuuraya dariiqyo qoto dheer oo u oggolaanaya maraakiibta iyo maraakiibta waaweyn ee adduunka ugu waaweyn inay soo galaan Dekedda. cusub Piers 300 iyo 400.
Shayga laga soo jaray dhismaha kanaalka waxaa loo adeegsan doonaa in lagu daro ku dhawaad ​​600-acres (242.8 hektar) dekada si ay uga caawiso in laqabto labanlaabkii shixnadaha xamuulka ah ee maraya Dekadda sannadaha 20 ee soo socda. Mashruuca oo dhami wuxuu ku kacayaa in ka badan $ 300MM oo u kala jaban qiyaas ahaan kala badh u dhexeeya Marxaladda 1 iyo Marxaladda 2.
Duqa magaalada Los Angeles Richard J. Riordan ayaa yiri, “Dekedda Los Angeles waa mid ka mid ah waxyaabaha loo yaqaan taajkeenna magaaladeena, abuurista shaqooyin, taageeridda dhaqaalaha maxalliga ah, innaga oo adduunka intiisa kale nagu xiraya. Maanta, waxaan u dabaaldegeynaa ballaadhintii ugu ballaarneyd taariikhda dekedda Mareykanka - iyo hal-abuurnimada oo nagu sii kicineysa xitaa meelo ka sii sarreeya. ”
Brig. Jeneraal J. Richard Capka, oo ah taliyaha, Injineerada Ciidanka, Qaybta Koonfurta Baasifigga, ayaa yiri, “Qorsheeyeyaasha labada Port ee Los Angeles iyo Corps waa lagu hambalyeynayaa hubinta in isla'egta lagama maarmaanka u ah guusha - dhaqaalaha, injineernimada, iyo deegaanka - wuxuu ahaa mid isku dheeli tiran mashruucan. Waxaan ku faraxsanahay doorka aan ka leenahay horumarinta dekeddan, annagoo dib ugu laabaneyna dabayaaqadii 1800-meeyadii iyadoo la sameynayo Corps 'Degmada Los Angeles. Waxaan rajeyneynaa qarnigeena labaad ee u adeegida dadka qaranka iyo Koonfurta California. ”
Labadaba Marxaladaha I iyo II qandaraasyo ayaa la siiyay The Pier 400 Constructors, oo ah shirkad wadajir ah oo ka tirsan Great Lakes Dredge & Dock Co. iyo Connolly-Pacific Co. qandaraas $ 148.6 milyan ah ayaa la siiyay Marxaladda I bishii Juun 1994. Mashruuca waxaa ku jiray horumarinta 3 miis. wadiiqooyin cusub oo ballaadhan oo ballaadhan, barkad rogrogaysa iyo 5000 ft oo xarriiq ah oo aag goobeed ah oo koonfurta ka xigta Pier 300 ee Jasiiradda Terminal.
Qeybtii 29 milyan yd3 ee walxaha soosaaray ee qotada dheer ee biyaha ah ee 45 ft ilaa 63 ft si loo waafajiyo konteenarada-qoto dheer iyo maraakiibta waaweyn ee qallalan. Maaddada la jeexjeexay ayaa ku jirta gadaal dikes dhagax, iyada oo la abuurayo xNUMX-acre (265 hektar) qayb ka mid ah dhul-beereed cusub oo la yiraahdo Pier 107.3, oo ku yaal aagga dekedda bannaanka koonfur ee Terminal Island. Acreage-kaan waxaa ku jira dariiq ciriiri ah oo buuxi kara kaasoo ku xiraya Pier 400 illaa Terminal Island oo u dhow xadka Los Angeles - Long Beach. Dhulka cusub wuxuu siiyaa ka ilaalin deg-deg ah mawjadaha iyo dusha sare.
Harooyinka waawayn waxay adeegsadeen 36 ″ (914 mm) Calaamadaha Ellicott® "Florida ” in la qabto shaqada inteeda badan shaqadan. The "Florida“, In ka badan 16,000 wadarta la rakibay HP (12,000 kW), ayaa lagu soo waramayaa inay tahay tii ugu weyneyd uguna awoodda badneyd ee wax soo saarta jareerta Mareykanka. Waxay soo saartay illaa 138,000 yd3 / maalin shaqadan si markaa Harooyinka waawayn ay awoodaan inay ku dhammeeyaan seddex bilood ka hor jadwalka.
Marxaladda II ayaa haatan la socota iyadoo $ 150 milyan oo qandaraas ah loo qorsheeyay in la dhammaystiro Janaayo 2000. Wejiga labaad ee mashruucu wuxuu si qoto dheer u miijin doonaa 63-ft kanaalka 81 ft, ​​wuxuu dheereyn karaa 50-ft kanaal wuxuu dhisayaa kanaal 75-ft-qoto dheer dhanka bari ee Pier 400, Marxaladda 1. 22 milyan yd3 ee walxaha la jeexjeexay wuxuu abuuri doonaa 325-acres dheeraad ah (hektari 131.5).
Qodaalka korantada ayaa dib loo rogay horaantii 1980s si ay uga shaqeyso aagga Los Angeles, halkaas oo Gudiga Xakamaynta Tayada Hawada ay ugu talagaleen in dhamaan qalabka dhismaha ee taagan ay yihiin kuwo koronto ku shaqeeya. Ka dib markii bamka jaranjarada lagu rakibay sallaanka dhererkiisu yahay 115-fuudh inta lagu gudajiray bilowgii sii xoojinta kanaallada, dhererka 34-inch ayaa ahaa mid awood badan oo ku filan inuu ku tuuro masaafada dheer ee loo baahan yahay bambooyin la'aan. Intii lagu guda jiray mashruucan, waxay ka soo tuuraysaa 18,000 fuud marinka laga soo galo badda ilaa buuxintiisa. Intii lagu guda jiray dhismaha marinka gaadiidka, khadka ugu dheer ee dheecaanku wuxuu ahaa 12,000 fiit. Iyada oo xamuul dhererkiisu yahay 184-cagood oo dherer ah lagu xiray dhinaca dambe, dhererka guud ee Florida ayaa ah 450 fuudh, oo u oggolaanaya rogrog ballaaran.
Mashiinka matoorka ugu weyn waa 10,000 HP, 13,200 volt Canadian General Electric motor. Awoodda xeebta ayaa ku soo dhacda qulqulka iyada oo loo marayo 15,000 cagaha xadhigga culus, oo la geeyay laba-reel baararka.
Mashiinka Kanadiyaanka ahi wuxuu ka yimid arjiga koowaad ee qashin qubka. Ellicott® International waxay dhistay “Florida", Ka dibna loo yaqaan"Clarence B. Randall“, Iyo gabar walaasheed ah oo isku mid ah sanadkii 1953-kii oo loo qoday ceelka macdanta birta ee Caland Ore. Labada dardaar waxay shaqeeyeen saacad kasta si ay uga saaraan boqolaal milyan oo mitir mitir cubic ah oo culus - in kabadan boqol mitir oo qoto dheer. Mashruuca 'Steep Rock' ayaa weli ah mashruuca kaliya ee ugu weyn ee macdanta qodista waligeed la qabtay. Waa ku mahadcelin heerarka naqshadaynta Ellicott® in mashiinnada furaha ahi wali shaqeynayaan 40 sano ka dib, iyo in qaab-dhismeedka qolofku uu waafajinayo hagaajinta soo socota ee kor ku xusan.
Markay harooyinka waaweyni diyaarinayeen “Florida”Mashaariicdii loo yaqaan 'Pier 400' ee 1997, waxay awood u yeelatay inay ku tiirsanaato Ellicott® International si ay u bixiso xog dhammaystiran oo injineernimo ah, in ka badan 40 sano dhismaha ka dib, si ay u caawiso hagaajinta harooyinka waaweyn.
Dekeddu waxay u qorshaysay goobtan konteenarro, dareereyaal badan iyo xarumo tareen. Mashruuca Pier 400 wuxuu bixiyaa faa'iidooyin dhaqaale oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin kororka mushaharka dhabta ah laga bilaabo $ 24.3 bilyan ilaa $ 40 bilyan. Intaas waxaa sii dheer, tabarucaada canshuuraha ee heer federaal, heer gobol iyo heer degmo ayaa ka kici doona min $ 12 billion ilaa $ 19.8 billion. Qodista iyo qashin qubka waa aasaaska udub dhexaad u ah Barnaamijka hirgelinta Dekedda Pier 300/400, oo ah barnaamij $ 650 milyan ah oo ka kooban 24 mashruuc oo kala duwan. Waa horumarintii ugu weyneyd ee horumarineed ee laga sameeyo deked kasta oo Mareykan ah iyo mashruuca horumarka ugu weyn ee dekedda ee 90-kii sano ee ay jirtay.
Barnaamijka hirgelinta ee Pier 300/400 wuxuu ka kooban yahay qeyb ka mid ah dhamaadka koonfurta wadada Alameda Corridor, wadada tareenka ee 20-mayl iyo wadada gaadiidka, isku xirka dekedaha Los Angeles iyo Long Beach ilaa qadka tareenka ee isku xira qaaradaha isla markaana abuuraya habab dhakhso iyo hufan in xamuulka loo qaybiyo dalka Mareykanka oo dhan. Dekedda Los Angeles waa mid ka mid ah dekadaha adduunka ugu mashquulka badan waxayna u adeegtaa marin muhiim u ah marinka West West ee ganacsiga caalamiga ah. Dekedda 7500-acre waxay leedahay 30 tas-hiilaad oo waaweyn oo ay weheliso 28 mayl oo dhinaca hore ah oo ku takhasusay baabuurta, jabbuurka, weel weelka lagu qaado, kuwa badan oo qalalan iyo kuwa xamuulka qaada ee dareeraha ah.
Iyada oo la tixgelinayo muhiimadda ay dekeddu u leedahay Los Angeles, ayaa Ciidanka Corps ee Injineerrada - khubarada injineernimada ee dawladda federaalka - waxay abuureen Degmada Los Angeles 1898-kii si loo fududeeyo dhismaha nidaamkeeda dekedda. Maanta, isla ruuxdaas iskaashiga iyo wada shaqeynta muddada dheer ah, Corps waxay sii wadaa inay ka caawiso Dekedda khibradeeda injineernimada, taasoo ka dhigaysa Dekedda Los Angeles mid ka mid ah marsooyinka ganacsi ee ugu weyn Mareykanka.
Waxaa laga soosaaray Macdanta Qodaalka Dunida & Dhismaha & Dib u eegista Qodista Caalamiga ah